चुनाव रोजौँ, संशोधनका उपाय खोजौँ
सरकारलाई समर्थन दिएको मधेशी मोर्चा अब सरकारसँग टाढिने खतरा बढेको छ । सरकारलाई चुनावको घोषणा गर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । तर संविधान संशोधन नगरी सरकारले चुनाव घोषणा गरे आन्दोलनमा जाने चुनौती मधेशवादी दलहरूले दिइसकेका छन् । संविधानले निर्धारित गरेको निर्वाचनको सीमा मिच्ने अवस्थामा सरकार छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने अवस्था पनि त्यति सहज छैन ।
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारको असहमति छैन । अधिकतम सहमतिका आधारमा यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको छ । अर्थात् सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर समस्या– संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ मत पाउनु सरकारका लागि सहज छैन । त्यसैले सरकारसँग प्रतिपक्षी एमालेको चुनाव घोषणाको माग पूरा गर्ने वा सत्ता सहयोगी मधेशवादी दलको चाहनाअनुरूप संविधान संशोधन नभएसम्म कुर्ने भन्ने दुईटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प जति सहज छ, दोस्रो छैन । किनकि संविधान अनुसार निर्धारित समयमा चुनाव नगराउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा असफल हुनु हो । संवैधानिक संकट सिर्जना गर्नु हो ।
मधेशवादी दलहरूलाई यो संविधान संकटमा पर्नुसँग खासै सरोकार छैन । किनभने उनीहरूले यो संविधानको स्वामित्व लिएका छैनन् । यद्यपि, संविधान लेखन प्रक्रियामा उनीहरू बाहिर बसे पनि आफ्नो अनुकूलताका लागि उनीहरू यो संविधान अनुरूपका प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा उनीहरू दुई पटक सहभागी भइसके । संविधान अनुसार संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्मा उनीहरू सहभागी छन् । सांसदका हैसियतमा राज्य सुविधा भोग गरिरहेका छन् । तर उनीहरू संसद्भन्दा बाहिरको मोर्चालाई उपभोग गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा नै देखिन्छन् ।
मधेशवादी र प्रतिपक्षका माग दुई ध्रुवतिर फर्केको देखिन्छ । एमाले संविधान संशोधनको कुरै सुन्न चाहँदैन । मधेशवादी दलहरू चुनावको कुरै गर्न चाहँदैनन् । यी दुवै अतिवादी सोचबाट निर्देशित छन् । मुलुकको हितभन्दा दलगत स्वार्थबाट उनीहरू प्रेरित जस्ता लाग्छन् । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनका एजेन्डा कुनै बेला एमाले पार्टीले बोकेको थियो । यो त्यही एमाले हो, जो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा मधेशवादीका यिनै माग पूरा गर्न तयार थियो । ऊ अहिले प्रतिपक्षीका हैसियतमा त्यही संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदैछ । मधेशवादी दलहरू जे माग राखेर संविधान संशोधन चाहिरहेका छन्, त्यसलाई पूरा गराउन आफैं प्रयत्नशील छैनन्, केवल सरकारसँगको वार्तामा उनीहरूको अभियान केन्द्रित छ ।
तराई–मधेशका दल भनेका अहिले संविधान संशोधनको चाहना राख्ने मधेशी मोर्चामा सम्मिलित दल मात्र होइनन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं सिरहाबाट निर्वाचित हुनु भएको हो । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि काँग्रेस नेताका हैसियतमा धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रभावशाली नेता माधव नेपालको जिल्ला रौतहट हो । एमालेका थुप्रै सांसद मधेशबाट निर्वाचित भएका छन् । आफूलाई ‘मधेश बाहिर’को ठान्ने केपी ओलीका पालामाभन्दा दुई नम्बर मधेश प्रदेशका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशी अधिकारका लागि संविधान संशोधनको विषय अघि बढेकै छ । संविधान संशोधन मधेशी नागरिकको अधिकारका लागि हो भनेर मधेशी मोर्चाले भनिरहँदा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको ठूलो विमति छैन । तर एमाले नेतृत्वले यसको औचित्य नै नरहेको बताइरहेको छ । के मधेशका सबै एमाले सांसदहरू पार्टीको अडान अनुरूप नै संविधान संशोधनको औचित्य देखिरहेका छैनन् त ? यो प्रश्न अरुले सोधुन् वा नसोधुन्, के मधेशी मोर्चाले उनीहरूलाई सोध्नु पर्ने होइन ?
संविधान संशोधन सरकारको प्रस्ताव पक्का हो । आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने प्रयत्न गर्नु सरकारको सामान्य दायित्वभित्र नै पर्छ । सरकार सामान्य बहुमतको आधारमा बन्छ तर संविधान संशोधन दुई तिहाइ मतबाट मात्रै पारित हुन्छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधन पास वा फेल हुनु सरकारमाथिको नैतिक प्रश्न हँुदैन । मधेशी मोर्चाको दबाबका कारण होस् वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आवश्यकता महसुस गरेर, संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ । यसमा सरकारको प्रयत्न मात्रै पर्याप्त नहुँदा आफ्नो एजेन्डाका पक्षमा लविङ गर्नु मधेशी मोर्चाको पनि कर्तव्य हो । तर यसतर्फ मधेशी मोर्चाको प्रयत्न बिल्कुल शून्य देखिन्छ । सरकारका प्रयत्नलाई प्रत्यक्ष हेरेर पनि फेरि पारित हुन कठिन प्रस्ताव पास भए मात्र चुनावमा जाने भन्नु विल्कुल अराजनीतिक अडान हो ।
सरकारले प्रस्तावलाई संसद्मा मतदानमा लैजान नचाहेमा असहमति जनाउनु मधेशी मोर्चाको राजनीतिक निर्णय हुने थियो । तर संशोधन पारित नभएसम्म चुनावमा जान पाइँदैन भन्नु हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति मात्र हो । कुनै राजनीतिक एजेन्डा संसद्बाट एकपटक असफल हुँदैमा त्यो सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन । बरु त्यही एजेन्डालाई चुनावी नारा बनाएर जान सकिन्छ । त्यो साहस मधेशी मोर्चाले गर्नुपर्छ । अहिलेको संसदीय संरचनामा राप्रपा जस्तो अनुदार शक्तिलाई बोकेर हिँड्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारले सफलता पाउने सम्भावना कम छ । कतिबेला उसले हात झिक्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन । अझ महाराजका विश्वासपात्र कमल थापाको नेतृत्वमा पुग्दै गरेको राप्रपासँग सरकारले विश्वास गर्ने आधार थप कमजोर हुँदै गएको छ ।
यो अवस्थामा मधेशी मोर्चाले चुनावको विरोध गर्नु भनेको संविधानलाई असफल बनाउने चालबाजी मात्र ठहरिने छ । चुनाव घोषणा गर्नु अघि संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान माग गर्नु मोर्चाको जायज माग हुनेछ । संशोधन पास वा फेल जे भए पनि चुनावमा जाने नैतिक साहस देखाउनु मोर्चाको राजनीतिक निर्णय मानिने छ । फेरि पनि, संविधान संशोधनको असफलता सरकारको प्रयासको असफलता हुनेछ, यसबाट सिङ्गो सरकार नैतिक संकटमा पर्छ भन्ने होइन । सामान्य बहुमत गुमाएको अवस्थामा मात्र सरकार नैतिक संकटमा पर्ने हो । सरकार परित्याग गर्नु पर्ने अवस्था आउने हो । त्यसैले मधेशी मोर्चा पहिले संविधान संशोधनको विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छ भने मतदानको प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार हुनु पर्छ । यसमा खुट्टा कमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट मधेशी मोर्चाको माग पूरा हुने सम्भावना निकै कम छ । चुनाव घोषणा गरेका कारण एमालेले संशोधनमा साथ दिन्छ भन्नु गलत हुनेछ । एमाले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघात बताएर संसदीय चुनावसम्म जाने तयारीमा छ । यो अफवाहलाई परास्त गर्न र एमालेलाई साइजमा ल्याउन बरु अहिलेको गठबन्धनलाई कसरी निरन्तरता दिएर संसदीय चुनावसम्म जाने भन्ने रणनीति सत्ता साझेदार खासगरी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाले बनाउन आवश्यक छ । चुनावको विरोध गरेर र संविधान संशोधनको रटान लगाएर मात्र संवैधानिक निकास निस्कने सम्भावना अत्यन्त कम छ । अन्यथा यसले मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई एमालेले भने जस्तै राष्ट्रघातको कित्तामा उभ्याउने खतरा रहन्छ ।